Seoul National University - Study na kacha mma na mahadum nke Korea
Seoul National University Nkọwa
acronym : SNU
tọrọ ntọala : 1946
Students (ihe ruru.) : 28000
Echefukwala atụle Seoul National University
Idebanye aha na Seoul National University
Seoul National University asọpụrụ ndị ideals nke na-emesapụ mmụta na aims akụziri ụmụ akwụkwọ a na ndụ ịhụnanya nke mmụta nke ga-etolite ihe ndabere maka na-aga n'ihu onye ibu.
N'otu oge ahụ ọ na-agba mbọ ka akwadebe ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ na-ebi ndụ na-esiwanye asọmpi zuru ụwa ọnụ na gburugburu ebe obibi. Dị ka South Korea akpa mba mahadum, Seoul National University nwere a omenala nke guzo ọtọ n'ihi ochichi onye kwuo uche na udo n'elu Korean dịịrị banye na mmiri.
Gụsịrị akwụkwọ na ogologo-eje ozi dị ejere ọha mmadụ ozi na isi ọnọdụ nke Korean ọchịchị. na-ezi, research, na ọha ọrụ, na University na-aga n'ihu ime ka ụkpụrụ nke kacha mma.
The ozi nke University na iri-na-narị afọ mbụ bụ ike a vibrant ọgụgụ isi obodo ebe ụmụ akwụkwọ na ndị ọkà mmụta iso ọnụ na-ewu ga-eme n'ọdịnihu. Dị ka Korea si eduga nnyocha mahadum, Seoul National University-agba mbọ ka diversifying ya amụrụ ahu na ngalaba, eme ka e nwee zuru ụwa ọnụ mgbanwe, ma na-akwalite ụzọ na-emetụbeghị nnyocha na niile ubi nke ihe ọmụma.
Seoul National University bụ otu ihe agụmakwụkwọ ka elu na Korea. Ebe ọ bụ na ya oruru na 1946, na University ka strived idu mba Izrel na amamihe na obi ike ọ bụla nzọụkwụ nke ụzọ n'akuku ọbọ mmepe na democratization.
Dị ka nchịkọta nke ihe elu-akụziri na kpọrọ n'ihi na ya unmatched agụmakwụkwọ rigor, Seoul National University na-arụ ọrụ iji mezuo ya ọrụ na-achụso ọkwa kachasị elu nke kacha mma. N'ihi ya, Seoul National University nweela a zuru ụwa ọnụ aha maka agụmakwụkwọ kacha mma, n'ịghọ otu n'ime mahadum gafee ụwa.
ugbu a, karịa mgbe ọ bụla, Seoul National University ghotara ya ibu ọrụ agabigaghị ókè nke academia na-akụkụ nke ọha mmadụ, mba na ụwa. mbụ, "SNU nganga" - Mahadum obodo nwere oké mpako na anyị alụmdi; nke abụọ, "SNU na People" - Mahadum na-ama ama site na mba anyị na anyị na ndị mmadụ; na akpatre, "SNU na Ụwa" - anyị na-raara onwe-a ụwa-klas mahadum.
A mahadum nile nwere ike ji,
A mahadum hụrụ n'anya ndi Israel,
A mahadum na-eduga ụwa.
Anyị ga-anọgide na-azụlite a vibrant ọgụgụ isi obodo site na eme creativity, akwụkwọ na-achụ na zuru ụwa ọnụ nke mkpebi na anyị na ụmụ akwụkwọ. Anyị na-agbalị ịkụziri ụmụ akwụkwọ dị ka zuru ụwa ọnụ na ụmụ amaala ndị ga-eso anyị na onyinye na ụwa ogbo.
President nke Seoul National University
College of Agriculture na Life Sciences
College of Human Ọmụmụ
Interdisciplinary Programs maka Undergraduates
Ụlọ akwụkwọ ndị gụchagoro mbụ
Professional ụlọ akwụkwọ
Gụsịrị akwụkwọ School of Business
Ukpep School of Convergence Science Technology
Ukpep School of Engineering Practice
Ukpep School of Environmental Studies
Ukpep School of Dentistry
Ukpep School of International Studies
Gụsịrị akwụkwọ School of Public Administration
Ukpep School of Public Health
Seoul National University e tọrọ ntọala na August 27, 1946 site-asọkọta ọnụ iri oru nke elu-akụziri gburugburu Seoul ebe. The ụlọ akwụkwọ nke e jikọrọ 'bu:
Gyeongseong University (Gyeongseong Daehakgyo, isiike University)
Gyeongseong College of Education (Gyeongseong Sabeomhakgyo, Isiike Nkịtị School)
Gyeongseong Women College of Education (Gyeongseong yeoja Sabeomhakgyo, Female Nkịtị School isiike)
Gyeongseong Iwu College (Gyeongseong Beophak Jeonmunhakgyo, Isiike Iwu School)
Gyeongseong Industrial College (Gyeongseong Gongeop Jeonmunhakgyo, Jingcheng Industrial College)
Gyeongseong Mining College (Gyeongseong Gwangsan Jeonmunhakgyo, Isiike Mining College)
Gyeongseong Medical College (Gyeongseong Euihak Jeonmunhakgyo, Isiike Medical College)
Suwon Agriculture College (Suwon Nongnim Jeonmunhakgyo, Suwon College of Agriculture, oke ohia,)
Gyeongseong College of Economics (Gyeongseong Gyeongje Jeonmunhakgyo, Ike aku College)
Gyeongseong Dentistry College (Gyeongseong Valley Euihak Germany bụ nmunhakgyo, Isiike Dental Medical College)
Onyeisi oche mbụ bụ Harry Bidwell Ansted. Ihe karịrị otu afọ na ọkara, enwere a ngagharị iwe site ụmụ akwụkwọ na ndị ọkachamara megide iwu nke U.S. agha ọchịchị Korea-asọkọta ọnụ kọleji. N'ikpeazụ, 320 professors na chụọ n'ọrụ na ndị ọzọ karịa 4950 ụmụ akwụkwọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ. The mahadum nke abụọ nke president bụ Lee Choon-ho (Yichunho, Li Chunhao), bụ ndị jere ozi mmalite na October 1947.
The College of Iwu e tọrọ ntọala site asọkọta ọnụ iwu ngalaba nke Kyŏngsŏng University na Kyŏngsŏng Iwu College. The mahadum etinye obi gị dum Seoul College of Pharmacy na September 1950, dị ka College of Pharmacy. Nke a na mbụ a na a onwe alụmdi.
N'oge Agha Korea, na mahadum e ji site North Korea na Seoul National University Hospital igbuchapu mere, mgbe nwa oge jikọrọ ya ọzọ mahadum South Korea, dị na Busan.
Ị chọrọ atụle Seoul National University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Seoul National University na Map
photos: Seoul National University ukara Facebook
Seoul National University reviews
Jikọọ na-atụle nke Seoul National University.
Ndị ọzọ na mahadum na South Korea